Gịnị Mere My iPhone Eme A Static Noise? Nke a bụ ndozi ahụ! - Iphone
ihuenyo iphone 5 gbara oji mana ọ ka na -arụ ọrụ
enweghị m ike imelite elekere apple m
okwu apple ekwe ntị Bluetooth
otu esi edobe imessage na iphone 6
’Re na-akpọ oku ekwentị ma ọ bụ na-ege egwu, iPhone gị amalite ịme mkpọtụ static. Ma eleghị anya, static ahụ na-ada ụda ma na-agbanwe agbanwe, ma ọ bụ ma eleghị anya ọ ga-eme naanị otu oge, mana otu ihe doro anya: Ọ na-ewe iwe. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe mere gị iPhone na-eme static noises na esi edozi nsogbu ahụ maka ezi.
Ebee Ka Static Si Abịa?
Aticda siri ike na-ada ụda ma ọ bụ nti ma ọ bụ okwu na ala gị iPhone . Dị ka ha dị elu, teknụzụ bụ isi dị n'azụ ndị na-ekwu okwu iPhone gị agbanwebeghị nke ukwuu kemgbe ndị ọkà okwu mepụtakwara: Ọdụ eletrik na-aga n'ime ihe dị mkpa (akpọrọ a diaphragm ma ọ bụ akpụkpọ ahụ ) nke na-ama jijiji iji mepụta ebili mmiri. Iji nwee ike ịma jijiji, ihe ahụ ga-adị gịrịgịrị - nke ahụ na - eme ka ọ ghara ịda mba.
Gịnị Mere My iPhone Ime Static Noises?
Ajụjụ mbụ anyị kwesịrị ịza bụ: IPhone m ọ na - eme mkpọtụ dị iche iche n'ihi nsogbu ngwaike (ọkà okwu ahụ mebiri emebi) ma ọ bụ nsogbu ngwanrọ?
Agaghị m sugarcoat nke a: Ọtụtụ oge, mgbe iPhone na-eme mkpọtụ dị iche iche, ọ pụtara na ọkà okwu emebiwo. O di nwute, ọkà okwu mebiri emebi anaghị abụkarị nsogbu enwere ike idozi n'ụlọ - mana agbaghị Apple Store ugbu a.
E nwere obere oge ebe a siri ike software nsogbu nwere ike ime ka ihe iPhone na-eme static noises . Sọftụwia iPhone gị na-achịkwa ụda ọ bụla na-egwu na iPhone gị, yabụ mgbe ngwanrọ software nke iPhone, ọkà okwu nwekwara ike.
Ọ bụrụ na iPhone gị malitere ịme mkpọtụ dị iche iche mgbe ị kwụsịrị ya ma ọ bụ were ya maka igwu mmiri, enwere ezigbo ohere na onye na-ekwu okwu mebiri emebi na iPhone kwesịrị idozi ya. Ọ bụrụ na iPhone gị malitere ịme mkpọtụ na-emebi emebi, ọ nwere ike ịnwe nsogbu ngwanrọ ị nwere ike idozi n'ụlọ.
Gịnị Mere My iPhone 8 Ọkà Okwu Na-eme Static Noise?
Ọtụtụ ndị zụtara iPhone 8 ma ọ bụ 8 Plus kọrọ na ha nụrụ mkpọtụ na-ada site na ntị nke iPhones ha n'oge oku ekwentị. Enwere otutu obere elektrọnik kpuchiri elu nke iPhone 8 dị nso na bọọdụ mgbagha.
Ọtụtụ elektrọnik na-emepụta ogige elektrọnik nke nwere ike igbochi ihe ọdịyo nke iPhone 8 gị, dịka ndị na-ekwu okwu. Ọ bụ ezie na ekwenyebeghị ya, Apple nwere ike ịhapụ mmelite ngwanrọ ọhụrụ nke na-edozi nsogbu mkpọtụ ụda iPhone 8.
Etu esi edozi nsogbu ngwanrọ ndị na - eduga na ụda mkpọtụ iPhone
The n'aka-ọkụ ụzọ chọpụta ma a ngwaike ma ọ bụ software nsogbu na-eme gị iPhone na-eme ka static noises bụ weghachi gị iPhone . Ọ bụrụ na ị gaa na Storelọ Ahịa Apple, teknụzụ ga-anwa idozi ngwanrọ ahụ tupu idozi ma ọ bụ dochie iPhone gị. Ihe iPhone Weghachi Ehichapu ma weghachite software niile dị na iPhone gị, yabụ sọftụwia ahụ dị ọhụụ dị ka mgbe o si na igbe ahụ pụta.
Iji weghachite iPhone gị, ịkwesịrị ijikọ ya na kọmputa nwere iTunes. Jide n'aka na ị kwadoro iPhone gị tupu ịmalite, n'ihi na usoro weghachite na-ehichapụ ihe niile dị na iPhone gị, gụnyere data nkeonwe gị. You nwere ike iweghachi data gị na nkwado ndabere mgbe ị debere ya ọzọ.
E nwere ụdị atọ nke eweghachi, ana m akwado ịme DFU iji weghachi iji dozie esemokwu a. Ọ bụ ụdị miri emi kachasị eweghachi, ma ọ bụrụ na nke a bụ nsogbu nke ahụ nwere ike -emezi, a DFU weghachi ga dozie ya. Edemede m banyere olee otú DFU weghachi ihe iPhone akọwa otú. Laghachite ebe a mgbe ị nwesịrị ya.
Mgbe iPhone gị kwusịrị iweghachi, ọ dị mfe ịkọ ma edozila nsogbu ahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na mkpọtụ na-abịa site na ọkà okwu na ala nke iPhone gị.
Akpa, jide n'aka na mgbanaka / nkịtị ịgbanwee n'akụkụ gị iPhone na-wetara na-atụ 'on' ọnọdụ. Ga-ejikọrịrị Wi-Fi ka ịmalite usoro ntọala. Kwesịrị ịnụrụ na ịpị mkpọtụ ka ị pịnye na paswọọdụ gị. Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, enwere ezigbo ohere onye na-ekwu okwu na ala iPhone gị adịghị emebi emebi.
Ọ bụrụ na ị na-anụ static si na ntị gị iPhone, ị ga-aga ije na usoro ntọala niile wee kpọọ ekwentị iji chọpụta ma edozi nsogbu ahụ ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụrụ na ị ka na-anụ static mgbe ị weghachite, iPhone gị nwere ike rụzie ya.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịrụkwa iPhone gị
O di nwute, mgbe etinyere ntị nke iPhone ma ọ bụ ọkà okwu gị mebiri emebi, ọ naghị abụkarị nsogbu enwere ike idozi n'ụlọ. Apple na-edochi ndị okwu iPhone na Genius Bar, yabụ na ị gaghị edochi iPhone gị dum ma ọ bụrụ na ọkà okwu mebiri ọ gwụla ma enwere mmebi ndị ọzọ.
Nhọrọ ọzọ bụ Pulse , na na-ina idozi ụlọ ọrụ ga-abịa nke gị na idozi gị iPhone na dị ka obere ka otu awa. Puls Ndozi na-rụrụ site a gbaara ka ẹkesikpede na-echebe site a ndụ akwụkwọ ikike.
iPhone nwere ike igwu o doro anya na ugbu a, static ahụ apụla
N'isiokwu a, anyị kpebiri ma nsogbu akụrụngwa ma ọ bụ ngwanrọ ọ na - akpata iPhone gị na - eme mkpọtụ na - adịghị mma, ma ọ bụrụ na ịnweghị ike idozi ya n'ụlọ, ị maara ihe ị ga - eme. Ọ ga-amasị m ịnụ banyere ahụmịhe gị idozi nsogbu a na ngalaba nke dị n'okpuru ebe a.
otu esi ahapụ nkata otu iphone